वागमती सफाइ अभियन्ता पौड्यालको प्रश्न, वागमती कहिले ढलमुक्त हुन्छ ? (भिडियो) – WASHKhabar
वागमती सफाइ अभियन्ता पौड्यालको प्रश्न, वागमती कहिले ढलमुक्त हुन्छ ? (भिडियो)
२६ पुष २०७७, आईतवार ०९:५७ 180 पटक हेरिएको
♦ सफाइ अभियानमा दलिय गन्ध आउन दिदैनौं ♦ वाग्मती सफाइको नाममा पैसा उठाए अभियानबाटै बहिस्कार ♦ सफाइ अभियान राष्ट्रिय जागरणको अभियान
काठमाडौ : पूर्व मुख्य सचिव एवं वागमती सफाइ महाअभियानका संयोजक लीलामणि पौड्यालले वागमती नदीमा ढल नपठाए बाँकी फोहोर सफाइ अभियन्ताले सफा गर्ने बताउनुभएको छ । संयोजक पौडेलले नदीलाई ढलमुक्त बनाउने बिषयमा सहरी विकास मन्त्रालय र अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना प्रमुखसँग प्रतिबद्धता माग्नुभएको हो । वाग्मती सफाइ महाअभियानले ४०० हप्ता पूरा गरेको अवसरमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा अभियन्ता पौड्यालले भन्नुभयो ‘नदीमा बिछ्याईरहेको ढलमा ढलै जाने अवस्था कहिले हुन्छ ? ढल नदीमा नजाने कहिले हुन्छ एउटा दिन चाहिं भनिदिनुपर्‍यो । हामी अभियन्ताहरुले ढल व्यवस्थापन गर्न चाहिं सक्दैनौं, नदीभित्र ढल पठाईदिनु भएन भने बाँकी फोहोर चाहिं हामी सफा गर्छौ ।’
उहाँले सार्वजनिक स्थलमा फोहोर फ्याँक्नेहरुलाई दण्डित गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो । कुकुर पालेकाहरुले सार्वजनिक स्थानमा दिसापिसाब गराउने गरेकाले त्यस्ता व्यक्तिलाई कुकुर किन्दा र पाल्दा हुने खर्च भन्दा ६/७ गुणा बढी जरिवाना गर्न उहाँले महानगरपालिकालाई आग्रह गर्नुभयो ।
संयोजक पौड्यालले नदी सफाइ अभियान राष्ट्रिय जागरणको अभियान भएकाले यसमा दलिय गन्ध आउन नदिने बताउनुभयो । नदी सफाइका लागि पैसा संकलन नगर्ने र कसैले संकलन गरेको भेटिएमा खबर गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो । वागमतीको नाममा पैसा उठाएको भेटिएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई अभियानबाटै हटाईने उहाँले बताउनुभयो ।